SAWIRO: Shabaab oo sheegtay in Saraakiil Mareykan ah ay ku dileyn Qaraxa ka dhacay Dulleedka Muqdisho… | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
SAWIRO: Shabaab oo sheegtay in Saraakiil Mareykan ah ay ku dileyn Qaraxa ka dhacay Dulleedka Muqdisho…
Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu waday ruux is-miidaamiye ah ayaa lala beegsaday Kolonyo ka tirsan Ciidamada AMISOM oo marayay degaanka Weydow ee duleedka Muqdisho.
Gaariga Qaraxa loo adeegsaday ayaa haa NOAH, waxaana uu noqday mid gebi ahaan burburay oo aanay waxba ka harin, iyadoo Alshabaab ay sheegtay qaraxa, isla markaana ay sheegtay inay la beegsaday saraakiil ka tirsan Mareykanka oo la socday kolonyada AMISOM.
War lagu Faafiyay Baraha Taageera Xarakada Al-shabaab ayaa lagu sheegay in Gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa ay la beegsadeen Ciidamo isugu jira Mareykan iyo AMISOM oo marayay Duleedka Galbeed ee Magaalada Muqdisho.
Warka Al-shabaab ayaa lagu sheegay in Gaari ay la socdeen Saraakiil Mareykan ah oo ka yimid Gobolka Shabellaha Hoose ay ku dhufteen Gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa oo uu waday mid kamida Dagaalameyaasha Al-shabaab.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM weli wax war ah kama soo saarin,inkastoo la sheegay in Qaraxa uu Khasaare gaarsiiyay Dad Shacab ah oo Goobta marayay.